NJIKWA FILEZILLA: EZIGHI EZI Ị GAGHỊ ARỤ ỌRỤ ỤLỌ AKWỤKWỌ TLS - ESI MEE - 2019
Nchọpụta nsogbu "Enweghị ike ijikwa ụlọ akwụkwọ TLS" njehie na FileZilla
Mgbe ụfọdụ, anyị anaghị achọ usoro mmemme ndị nwere ike ime ihe niile. Ha chọrọ ogologo oge iji ghọta ihe, ma achọrọ m ịmepụta ebe a ugbu a. N'ọnọdụ dị otú a, usoro mmemme ga-abịa napụta, nke nwere ike ọ gaghị enwe ọrụ niile dị mkpa, mana ha nwere ihe dịka mkpụrụ obi.
MyPaint bụ otu n'ime ndị ahụ. N'okpuru ebe a, ị ga-ahụ nke ahụ, n'eziokwu, ọ dịghị ọbụna ụfọdụ n'ime ihe ndị dị mkpa dị n'ime ya, ma ọbụna onye dị anya site na ịbịaru nwere ike ịmepụta ihe na-akpali mmasị. Tụkwasị na nke ahụ, a ghaghị iburu n'uche na usoro ihe omume ahụ dị ugbu a na ule beta.
Nke a bụ ihe MyPaint mepụtara, n'ihi ya enweghi nsogbu na iche iche. Dị ka ngwá ọrụ, nke mbụ, ọ dị mma ịtụle ahịhịa, nke ọtụtụ ụdị dị. Mbemiso ndị a na-eṅomi ihe niile ga-ekwe omume: brushes, markers, crayons, penscils nke dị iche iche siri ike na ọtụtụ ndị ọzọ n'ezie na-adịghị nnọọ ịbịaru ihe. Tụkwasị na nke a, ịnwere ike ibubata nke gị.
Ihe ndị ọzọ fọdụrụnụ bụ ntakịrị ihe na-adighi mmasị: ogologo, ogologo njikọ, ellipses, shading, na contours. Ihe ndị a na-adịtụ anya na ndepụta nke vector ndịna - ebe ị nwere ike ịgbanwe ọdịdị nke ọdịdị mgbe e kere eke, na-eji ihe nchịkwa. E nwere ihe ole na ole na-erugharị parameters: ọkpụrụkpụ, nghọta, njigide na nrụgide. Otú ọ dị, a ghaghị ịkọwapụta "mgbanwe nke ike" ike, nke na-enye ohere ịgbanwe oke ọkpụrụkpụ n'ogologo ya.
Anyị kwesịkwara ịkọwa ọrụ ahụ "ịbịaru nso". Na ya, ị nwere ike ịmepụta usoro ihe atụ nke ọma, na-eru naanị otu ọkara.
Na-arụ ọrụ na okooko osisi
Mgbe ị na-ekepụta foto, a na-ekenye òkè dị mkpa na nhọrọ nke agba. Maka nke a, e nwere 9 (!) Ụdị palettes dị iche na MyPaint. E nwere ma setịpụrụ ọkọlọtọ na ụfọdụ agba awụlị, na ọtụtụ ngwaọrụ maka ịhọrọ ụcha pụrụ iche. Ihe kwesiri iburu n'uche bu onodu nke ederede nke i nwere ike ijikota agba, dika odi ndu n'ezie.
Dị ka ị ghọtara ugbu a, ọ dịghị mkpa ichere maka mmasị pụrụ iche n'ebe a. Nbudataghari, agbakwunye / nhichapụ, na-akpụgharị, na-agbatị, na-agbanwe nghọta na ọnọdụ - nke ahụ bụ ngwaọrụ niile maka ịrụ ọrụ na n'ígwé. Otú ọ dị, maka ịbịaru ihe dị mfe na ọ dịghị mkpa. Na nkochi, ị nwere ike iji ndị editọ ndị ọzọ.
• Ịba ụba nke brushes
• Ọrụ mmepụta ihe nkiri
• Agba agba
• Ebe na-emeghe ma na-emeghe
• Enweghị ngwá ọrụ nhọrọ
• Enweghị ike ịgbazi agba
• Ugboro ugboro
Ya mere, MyPaint - maka oge a, enweghi ike iji ya mee ihe na - arụ ọrụ - ọ dị ọtụtụ ezughị oke na ntanetị na ya. Ka o sina dị, ọ bụ n'oge na-adịghị anya iji wepụ usoro ihe omume ahụ, n'ihi na ọ ka dị na nhazi beta, na n'ọdịnihu, ikekwe, ọrụ ahụ ga-arụpụta ihe dị mma.
Download MyPaint maka n'efu
SkinEdit Ike ike ABViewer MODO
MyPaint bụ mmemme dị ukwuu maka ndị na-amalite ọrụ na ndị ọrụ oge niile na-achọ ịdọrọ na kọmputa ha.
Onye Mmepụta: MyPaint